Toa mahalasa saina ihany ny zava-nitranga tato anatin’ny andro vitsy. Niverina indray ny fakana an-keriny, mandeha ny resaka fahavakisan’ny fonja … Fifandrifian-javatra ihany sa fanarian-dia ny vahoaka manoloana ity aretin-doza efa mandripaka ity ? Petra-kevitra hafa azo handikana ny zava-misy ihany koa anefa ny hisehoan’ny toe-javatra goavana toy ny mety hirodonan’ny fanjakana. Tsy misy zavatra voafehy intsony eto amin’ny firenena ary mampiteny ny moana mihitsy ny tsy fahombiazan’ny mpitondra. Raha tsy manilika andraikitra dia mampanantena poak’aty sy milaza handray andraikitra hatrany. Tsy mahafehy ny fitantanana ny firenena sy efa mahana tsy henjehina sy toa efa manongan-tena vokatry ny tsy fahombiazana. Mbola midingin-drambo sy mihantsy ady hatrany anefa satria diso adversera, ka mbola ny kapa ranjo politika no kotrehina hahafahana mitazom-pahefana.